I-OFFA Poly Portal www.portal.fpo.edu.ng/admission.aspx Uhlaziyo lwamva nje: Iindaba zeSikolo ngoku
I-OFFA iPort Portal: Njengomfundi we-OFFA polytechnic, olu lwazi luya kuba ngumdla kuwe. Kukho uyilo ngokukhethekileyo lwabafundi be-OFFA Poly.
Kule portal, imisebenzi emininzi yokufunda inokwenziwa ngokukhululeka. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ufunde eli nqaku ukuze ufunde ngakumbi ngendlela yokufikelela kwi-porta poly portal. Nangona kunjalo, uyazi ntoni nge-OFFA poly?
IFederal Polytechnic OFFA (FEDPOFFA)
The Federal Polytechnic, eOffa, yaqala ukubakho ngo-1992. Kwaye kungenxa yesibhengezo sikaMongameli. Kananjalo le yenziwa kwibhotwe lobuKhulu baKhe uOlofa waseOffa; Oba Mustapha Olawoore Olanipekun Ariwajoye 11.
Ngaphaya koko, isibhengezo senziwa nguMongameli welo xesha u-Ibrahim Babangida ngexesha lotyelelo lukarhulumente e-1991. Ukongeza, iPolytechnic inebhongo lokugcina iNkcubeko ekwi-Intanethi.
Uninzi lwezinto ezenziwayo, ezinje ngeNtlawulo yeMali yeSikolo, ukuBhaliswa kweeKhosi, indawo yokuhlala ehostele njl.njl.
Ukubaluleka OFFA Poly Portal
Ukuba ukhangela ukungena kwePOSA Portal, iziphumo ozifunayo zingezantsi. Nangona kunjalo, ngaphambi koko, makhe siqwalasele ukubaluleka kwale portal.
Apha ngezantsi zizibonelelo eziphambili ze-OFFA IPort Portal:
I-OFFA iPort Portal
I-OFFA Poly Portal inokufikelelwa ngekhonkco elingezantsi:
I-OFFA iPort Portal: https://portal.fpo.edu.ng/admission.aspx
Indawo yokuNgena kwi-OFFA: https://portal.fpo.edu.ng/Default.aspx?tabid=216
I-OFFA yePort UTME Portal
Oku kukwazisa bonke abagqatswa abathathe inxaxheba kwiFederal Polytechnic, eOffa (FEDPOFFA) kwi-Intanethi yokuthumela uvavanyo lwe-UTME ukuze bajonge imeko yabo yokwamkelwa.
Uluhlu lokungeniswa kwe-PolyA Poly lunegama labagqatswa abamkelweyo kwiinkqubo ezahlukeneyo ze-ND zexesha elizeleyo. Ukufikelela kolu luhlu, landela olu lwazi lungezantsi:
Yiya kwi UMGAQO-NKQUBO WOLAWULO ubume bokwamkelwa kokujonga i-portal @ http://portal.fpo.edu.ng/Default.aspx?tabid=162.
Nika inombolo yakho yesicelo kwikholamu efunekayo.
Okokugqibela, cofa kuqhubeka ukufikelela kwimeko yakho yokwamkelwa ye-OFFAPOLY.
Iinkqubo zokwamkelwa ze-OFFA Poly HND
Ulawulo lweFederal Polytechnic, iOffa (FEDPOFFA), Kwara State, ngoku ithengisa iifom zokwamkelwa kwiDiploma yeSizwe ePhakamileyo (HND) kwiinkqubo zakusasa nakusihlwa zeseshoni ye2020 / 2021.
Sinikeze yonke into oyifunayo malunga noku. Ke, ukuze ufunde okungakumbi, qhubeka ufunde.
Kananjalo, izicelo ziyamenywa kubagqatswa abafanelekileyo ukuba bangeniswe kwiDiploma yeSizwe ePhakamileyo (HND) yexesha elizeleyo kunye neenkqubo zesingxungxo zeFederal Polytechnic, iOffa yeseshoni ye2020 / 2021 yezifundo.
Iimfuneko ze-OffA zokungeniswa kwe-Poly HND
Izidingo zokungena kuzo zonke iinkqubo zeDiploma yeSizwe ePhakamileyo (HND) zezi zilandelayo:
Abaviwa bayacelwa ukuba bafumane iDiploma yeSizwe (i-ND), kwiDiploma yeSizwe yeNovative (NID) kwinkqubo yabo abayikhethileyo. Ukongeza, ayifanelanga ukuba ibe libakala elingaphantsi kohlelo olusezantsi LWE-CREDIT ukusuka kwiPolytechnic eyamkelweyo / eyamkelweyo, iMonotechnic okanye iZiko lamaShishini oLungiso.
I-SSCE, i-GCE O'level ubuncinci yokupasa ngetyala ezintlanu (5) kwizifundo ezifanelekileyo kubandakanya uLwimi lwesiNgesi kunye neMathematics ezifunyenwe kwiindawo ezingaphezulu kwesibini (2).
Kwakhona, iSatifikethi seSizwe soBugcisa (i-NTC) okanye iSatifikethi seShishini seSizwe (i-NBC) enqanaba lokuthenga ngetyala kwezorhwebo kunye nezifundo ezine ezifanelekileyo ezibandakanya uLwimi lwesiNgesi neMathematics.
Ukongeza, abagqatswa kufuneka okungenani babe nonyaka omnye kwisithuba seSizwe seDiploma soqeqesho kuShishino.
Nangona kunjalo, abagqatswa abaphumelele ibakala kwi-ND / NID banelungelo lokuqwalaselwa ngokwamkelwa ukuba ubuncinci kwiminyaka emibini (2) iminyaka yamava oqeqesho kuShishino.
Ngolwazi malunga neemfuno zokungenela ezizodwa kwiinkqubo zeDiploma yeSizwe ePhakamileyo (HND), umgqatswa kufuneka atyelele le Polytechnic Portal www.dk.edu.ng
Ungasifaka kanjani isicelo sokwamkelwa kwe-OFFA Poly HND
Ukufaka isicelo kwi-Intanethi kwi-HND (FT) kunye neenkqubo zeXesha leXesha leHND, abaviwa kufuneka bandwendwele le portal Polytechnic: www.dk.edu.ng. Kwakhona, cofa ekwamkelweni ukuze ugcwalise ifom yesicelo.
Ukongeza, emva koko uhlawule amawaka alishumi elinesihlanu eNaira (N15,000.00) kuphela kwifom yesicelo kwaye akukho zintlawulo ziya kufunwa.
Abaviwa mabafake kwakhona ikopi yesatifikethi / iziphumo / kunye nezinye iimpepha ezifunekayo njengoko kuchazwe kwi-intanethi.
Ungasifaka kanjani isicelo sokwamkelwa kwe-OFFA Poly HND ngaphandle kweJAMB
Abaviwa ngaphandle kwenombolo yobhaliso yeJAMB kufuneka kuqala bangene kwi jamb.gov.ng. Apho, baya kugqiba inkqubo yokwenza isicelo sokwamkelwa kwi-Federal Polytechnic Offa.
Kwakhona kuya kufuneka uhlawule umrhumo wesicelo samaNkulungwane amaThathu amaNaira kuphela (₦ 3,500) ukufumana iNombolo yoBhaliso yeJAMB. Landela la manyathelo angezantsi:
Ngena kwiwebhusayithi yeJAMB CAPS kunye nerejista.
Bhatala isixa-mali se-N3,500 ukwenza ukuba ufumane inombolo yobhaliso ye-JAMB (Inokwenziwa ngokulula kumaziko avunyiweyo e-JAMB e-CBT).
Nceda uqaphele ukuba nawuphi na umgqatswa ongathobeli le ndlela ingasentla yesicelo akanakwamkelwa kwi-Federal Polytechnic OFFA. Kungenxa yokuba idatha yabo ayizukubakho kwiNkqubo yokuCwangciswa kweeNdawo zokungeniswa kweJamb Central (CAPS).
Abaviwa kufuneka baphinde balayishe ikopi ekhethiweyo yesatifikethi / iziphumo / kunye nezinye iimpepha ezifunekayo njengoko kuchazwe kwi-intanethi.
Faka isicelo apha.
Uvavanyo lwe-OFFA Poly yoKwamkelwa
Bonke abagqatswa kufuneka balayishe iziphumo zabo; izatifikethi / iziqinisekiso kwinyango yePolytechnic fpo.edu.ng. Kwakhona, abaviwa mabagcwalise ifom yezokhuseleko kwiPorttechnic portal.
QAPHELA ukuba ukusilela ekuthobeleni le nkqubo, kukhokelela ekungafanelekeni kwalowo mgqatswa. Kwaye amabango obuxoki aya kukhokelela ekuphulukaneni nokwamkelwa ngalo naliphi na ixesha elifanayo.
Kwakhona, abagqatswa bayalelwe ukuba batyelele iPorttechnic's Portal www.fpo.edu.ng ukulungiselela iimfuno zokungena ezifanelekileyo kwiinkqubo abazikhethayo kunye nolunye ulwazi olufanelekileyo.
Ukuba ucinga ukuba esi sithuba singaluncedo komnye umntu, nceda usabe kuTwitter, kuFacebook, kuWhatsApp okanye nge-imeyile kubahlobo. Kukho amaqhosha angezantsi koku (kulula nokukusebenzisa)!
Ifom yokungeniswa kweFederal Poly Offa HND 2021/2022 yoHlaziyo lweSango lokuSebenza
Intlawulo yokwamkelwa kweFree Poly Offa 2020/2021 kunye neNkqubo yokuHlawula
PCC www.pcc.gov.ng Ukuqeshwa kwePortal 2021/2022 Jonga iZithuba ezikhoyo ngoku
Iziphumo zokutya okugxininisayo kwizidlo ezinamanqanaba aHlengisiweyo e-Groundnut Haulms ekusebenzeni kweFriesian X Bunaji Iinkomo
Isithuba saNgoku soNxibelelwano noMlawuli weMicimbi kaRhulumente kwi-Integrated Corporate Services Limited (ICSL)
Gcina aBantwana eNigeria kuLuhlu olufutshane loMgqatswa 2021/2022 Uluhlu lwePDF ukhuphelo
I-FCE Abeokuta ekudibanisaneni ne-UI yoLuhlu loKwamkelwa kwesiDanga se-2019/2020 yeSeshoni yezifundo
tags: federal polytechnic offa yabafundi portal, fedpoly offa post utme ikhonkco lobhaliso, Ukubaluleka kwe-portal polytechnic portal, Indawo yokungena ye-poly, isango le-polytechnic
« I-OOU Portal yaBafundi www.oouagoiwoye.edu.ng Jonga uHlaziyo lweSicelo samva nje
I-FUNAAB Portal yaBafundi www.unaab.edu.ng/ Jonga iPortal yesicelo samva nje »
Amandla e-N-2021 ePortal Portal www.npvn.npower.gov.ng Ukuhlaziywa kokungena
Imisebenzi yokuFundisa e-Abuja 2021 Jonga iZithuba zokuGaywa kwaAgasti zamva nje